Iziphumo zovavanyo lokutsala umnxeba ukuze uthathe isenzo kunye neHubspot | Martech Zone
Iziphumo zovavanyo lokutsala umnxeba-nge-Action nge Hubspot
NgoLwesibini, Januwari 15, 2013 NgoLwesibini, Januwari 15, 2013 Douglas Karr
Kuhlala kumangalisa ukubona ukuba ukungafani okufihlakeleyo kwifowuni yesenzo kunokuba nefuthe elikhulu kakhulu kumaxabiso onqakrazo kunye nokuguqulwa. Enye yeendawo ze Hubspot Andiqondi ukuba abantu abaninzi basebenzise ngokupheleleyo icandelo labo lokuFowunela ukuSebenza.
Uya kuqaphela umnxeba omnye oya kwisenzo kwiMartech ezantsi kweenyawo kwikholamu yasekhohlo. Sivavanye iinguqulelo ezintathu ezifanayo zokubiza isenzo. Imiyalezo yayifana ncam, kodwa umbala sowuhluka. Inye yayiyimvelaphi emnyama eyayithelekisa kakhulu iphepha kunye nelinye laliphantse lafana-ngokutshintsha nje umbala weqhosha.
Iziphumo zinomdla- i-CTA enamaqhosha aluhlaza iyazigqwesa ezinye ii-CTA phantse kabini! Inguqulelo yamaqhosha oluhlaza ikhokelele kunqakrazo oluncinci, kodwa inqanaba lokuguqula kakhulu.
Olu luvavanyo oluncinci apho sahluka imibala kuphela… siya kuqhubekeka yandisa iCTA kunye neenguqulelo ezahlukileyo kwimibala emininzi kunye nokwahluka kovavanyo ukulungiselela ukuphucula iziphumo. Siyayiqonda nento yokuba inqanaba lokucofa liphelele liphantsi kakhulu, nathi… sinomsebenzi ekufuneka siwenzile xa sivelisa le CTA. Kwindawo enzima kwaye ayisoloko ichaphazela umxholo ojikeleze yona.
IHubpot yenza ukuba kube lula ukuvavanya. Unokongeza iinguqulelo ezininzi zomnxeba-wentshukumo kunxibelelwano lwazo emva koko ungene nje kwiskripthi abasibonelela kwindawo yakho. Hubspot ikwabonelela ngeendlela zokujolisa kubakhenkethi abathile ngokubiza-kuthathe isenzo ... kodwa sesinye isithuba!
Phawula: Highbridge isiqinisekiso Hubspot Iarhente.
tags: vavanyoumnxeba kwisenzoumnxeba kuvavanyo lwentshukumohubspotuvavanyo
Yongeza i-Icon yasekhaya kwi-WordPress Navigation Menu
Jan 15, 2013 kwi-10: 51 AM
Bendingazi ukuba uyi-Arhente ye-Hubspot Doug! Sisebenzisa iHubspot ngoku http://www.tynerpondfarm.com kodwa bebecinga ukutshintsha. Ngaba singathetha ngayo kungekudala? Asizifumani iziphumo esizifunayo kodwa inokuba lityala lethu….
NgoJanuwari 15, 2013 ngo-6:54 PM
Ewe, ngokuqinisekileyo. Sisebenzise iHubspot, Pardot, ActOn, Marketo kunye ne-Eloqua kunye nabathengi bethu @chrisbaggot:disqus :). Ewe, iinkampani zase-Indiana aziyazi loo nto kuba ziqesha ii-arhente ezivela kwamanye amazwe, lol.